Yaadannoowwan Chibook: Seenaa butamuu Bokoo Haaraam duraa dubaan himame - BBC News Afaan Oromoo
Himuu seenaa baqannaa ittise
Looltoonni Bookoo haraam motara hatuuf dhaqan, waan dhanqaniif dhabnaan shammarran 200 mana baruumsaa keessaa ukkaamsuun fudhatanii deebii'an.
Isaan booda hoo maaltu ta'e?
Dubaroonni muraasnis nama barumsaatii konkolaataa milishootaatti yoo fa'eeman, baayyeen isaanis qaaxaan qawwee itti qabamuun hanga konkolaatoonni biraa baayyeen dhufanii isaan fudhanitti akka miilaan adeeman taasifaman.
Yaadannoowwan eenyuutu barreessee?
Barreessituun yaadannoo mummeen: Naa'omii Addaamuu fi Saaraah Saamu'eel
Rhoodaa Pitar, Saaraatu Ayubaa fi Maargaareet Yaamaa gumaata xiqqoo taasisaniiru.
Afran isaaniis erga mariin taasifameen booda Caamsaa, 2017 gadiifamaniiru.
Saaraah Saamu'eel ammoo bara darbee milishaatti heerumuuf waan waliigalteef achumatti hafte jirti.
Gara bosoona Bookoo Haaraam itti dhokatuutti osoo deemaa jiranuus, yoo barattoonni muraasni konkolaataa irraa utaaluun harkaa miliquu eegalan intalli tokkoo warra isaan butanitti himte. Tarii qofaatti hafuu soodaachu irraa ka'uun ta'u mala. Yookanis abbaa taayitaa kamiifuu abomamuuf ykn dararama keessatti waliin turu barbaaddee ta'u mala.
"Dubarri konkoolaataa keessa turte tokkoos, ''Konkoolaachisaa, shamarran tokko tokko baqachuuf utaalaa jiru,' jette. Isaan boodas konkolaachisaan dhaabuun karra banee baatiiriidhaan barbaacha isaanii deeme, garuu eenyunuu argachu hindandeenye. Kanaafuu, bakka tokkoo turuu akka qabaatan itti himan. Yoo ammas kan utaananii bu'u yaalan ta'e isaan argan akka itti dhokaasan itti hima.''